Wararka - Sidee bay tuubooyinka shucaaca ahi u dheeraan karaan
Dhab ahaantii, alaab kasta oo kululaynta korontadu waxay leedahay nolosheeda adeegga. Alaabooyin kuleyliyaha korontada ku yar ayaa gaari kara in ka badan 10 sano. Si kastaba ha ahaatee, haddii tuubada dhaldhalaalka si sax ah loo isticmaalo oo loo dayactiro, tuubada iftiimaya ayaa ka cimri dheer kuwa caadiga ah. Xiao Zhou ha kuu soo bandhigto. , Sida loo sameeyo tuubada dhaldhalaalka u sii raagto.
Waa mamnuuc in culayska la saaro isticmaalka tuubbooyinka shucaaca muddo dheer. Tuubbo kasta oo ifaysa waxay leedahay xadka isticmaalka. Haddii ay dhaafto xadka, dabiici ahaan ma ahaan doonto mid waarta.
Marka heerkulka foornadu uu yahay 400 digrii, xasuuso inaadan si degdeg ah u qaboojin;
Ha taaban tuubada nuurka leh marka la rarayo iyo la dejinayo.
Marka foornada tuubada dhalaalaya ay shaqaynayso, had iyo jeer fiiro u yeelo in nalalka taraafikada ee guddiga xakamaynta ay yihiin kuwo caadi ah, maxaa yeelay nalalka taraafigga waxay u baahan yihiin in la is -weydaarsado muddo inta lagu jiro ilaalinta kuleylka, si aysan u gubin tuubada dhalaalka fashilka furaha koontaroolka.
Dhawaan, kooxdayadu waxay si guul leh u horumarisay TANKII APM. Waa macdan budada horumarsan, firidhsan la xoojiyay, ferrite FeCrAl alloy kaas oo loo isticmaalo heerkulka tuubada ilaa 1250 ° C (2280 ° F).
TANKII tuubooyinka APM waxay leeyihiin xasilooni qaab wanaagsan heerkulka sare. TANKII APM waxay samaysaa oksaydh dushiisa oo aad u fiican, oo si fiican u ilaaliya inta badan bay'adaha foornada, sida Oxidising, sulphurous iyo gaaska carbonaceous, iyo sidoo kale ka hortagga kaydka kaarboon, dambas, iwm. daawaha gaar ah.
Codsiyada caadiga ah ee TANKII APM waa tuubooyin dhalaalaya oo ku jira foornada korontada ama gaaska sida foornada galvanizing ee joogtada ah, foornooyinka bakhtiinta shaabadaynta, foornooyinka haya iyo foornooyinka qandhada ee aluminium, zinc, warshadaha hogaaminta, tuubooyinka ilaalinta kuleylka, daboolka foornada ee codsiyada qallafsan.
Waxaan ku siin karnaa APM qaab silig iyo tuubbo ah. Ku soo dhowow amarka ama weydiinta.
Waqtiga dhejinta: Oct-30-2020
Fur gariiradda kululeeyaha, Bayonet Element Element, Nickel Wire, Bayonet kululeeyaha, Wire Resistance, Qaybaha kululaynta,